अहिलेको राष्ट्रपति भवन अर्थात सितल निवास कसको हो थाहा छ ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com अहिलेको राष्ट्रपति भवन अर्थात सितल निवास कसको हो थाहा छ ? - खबर प्रवाह
अहिलेको राष्ट्रपति भवन अर्थात सितल निवास कसको हो थाहा छ ?
यो चित्र अधिराजकुमारी तारा राज्य लक्ष्मी राणा र उनका पति जनरल कृष्ण शम्शेर राणाको हो। विक्रम संवत् १९५८ सालमा जन्मेर २०३९ सालमा स्वर्गे भएकी अधिराजकुमारी तारा स्वर्गीय श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवनकी जेठी दिदी हुन् । प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर राणाकि जेठी पत्नीपट्टिका कान्छा छोरा जनरल कृष्ण शम्शेर राणासंग उनको विवाह भएको थियो। कुनै समय जनरल कृष्ण शम्शेर बेलायतको लागि नेपालको राजदूत भएर पनि गएका थिए।
जनरल कृष्ण शम्शेर राणा र अधिराजकुमारी तारा आफ्नो उदारता र दानशीलताको निम्ति प्रख्यात थिए।आफ्नो परिवारसंग कुरा नमिलेपछि जनरल राणा भारतको बैंगलोरमा स्वनिर्वासित भएर बस्न गए । त्यही उनको निधन भयो । आफ्ना पतिको निधन पश्चात् अधिराजकुमारी ताराले बैंगलोरको आफ्नो सबै सम्पत्ति “अरविन्द आश्रम”लाई दान गरेर आफ्ना पतिले बसेर लेख्ने-पढ्ने गरेको सानो एउटा टेबिलमात्र सम्झना स्वरुप ल्याएर काठमाण्डु फर्केकी थिइन् ।
हाल राष्ट्रपति भवन रहेको शीतल निवास पनि पहिले उनकै थियो । विदेशी अतिथिको स्वागत सत्कारको निम्ति काममा प्रयोग गरियोस् भनी अधिराजकुमारी तारा र जनरल कृष्णले बैंगलोर जाँदा यो भवन सरकारलाई दान गरेर गएका थिए। यो भवन शाही अतिथिगृह र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै हाल राष्ट्रपति भवनको रुपमा प्रयोग हुँदै छ।
काठमान्डुको बौद्धस्थित हयात रिजेन्सी होटेलको पुरानो भवन र त्यसले चर्चेको भूमि पनि कुनै समय अधिराजकुमारी ताराले नेपाल महिला संगठनलाई दान गरेर दिएकी थिइन्। २०४७ सालमा बहुदल आएपछि त्यो संगठन पनि भंग गरियो। सरकारको स्वामित्वमा पुगेको त्यो अचल सम्पत्ति पनि व्यापारीको हातमा पुग्यो र त्यसलाई होटेलमा परिणत गरियो ।
अचेलका मानिसहरु यति कृतघ्न छन् कि यी दानवीर दम्पतिहरुको नाम त के एउटा चित्र पनि न राष्ट्रपति भवनमा भेटिन्छ न नेपाल महिला संघमा । हयात रिजेन्सी होटेलमा भेटिने त झन् कुरै भएन । (रोचक खबरबाट)
पूर्वपति छविले दिए रेखालाई बिहेको बधाई, शिल्पासँगको डिभोर्स अझै अदालतमा
काँग्रेसका स्थापित नेताहरू माओवादीमा प्रवेश, प्रचण्डद्वारा स्वागत
प्रेमिकालाई भेट्न मन लाग्यो कि एकजना व्यक्तिले पूरा गाउँभरी लोडसेडिङ गराएको थाहा पाएपछि इलेक्ट्रिसियनको जागिरबाट उनलाई निष्कासन गरिएको छ । भारतको पूर्वी बिहारस्थित एउटा सानो गाउँ गणेशपुरका मानिसले हप्तौँसम्म बारम्बार लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्तो समस्या कसरी निम्तियो भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन किनभने खासै त्यस्तो समस्या कतै पनि देखिएको थिएन । यस्तो समस्या […]
काठमाडौं । मंगल ग्रहमा प्रायः अनौठो चीजहरू पत्ता लगाइन्छ। पछिल्लो समय अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको क्युरियोसिटी रोभरले ढुङ्गामा वर्गाकार बाटो देखेको छ । ढुङ्गा काटेर भित्र बाटो बनाएको जस्तो लाग्छ । यो ढोका भित्र के छ अहिले थाहा छैन। तर, हेर्दा यो भित्र कुनै प्राणी बसेको जस्तो देखिन्छ । नासाको यो तस्विर निकै अचम्मको छ […]
३० वर्षमा बने ४७ बच्चाका पिता
एक व्यक्तिले आफू ४७ बच्चाका पिता बनिसकेको र छिट्टै नै अन्य १० बच्चाका पिता (बायोलोजिक फादर) बन्न लागेको दाबी गरेका छन् । तर उनले आफ्नो पीडा पनि व्यक्त गरेका छन् र यसले आफ्नो डेटिङ जीवन बर्बाद गरिदिएको बताएका छन् । वास्तवमा, यी व्यक्ति एक स्पर्म डोनर हुन् । केल गार्डी नामका यी व्यक्ति अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा […]
केवल सुत्नका लागि ४२ हजार तलब !
वर्तमान समयमा निकै व्यस्त तथा धपेडीपूर्ण जिवनशैली तथा जागिरको तनावका कारण मानिसहरुको निद्रा खल्बलिने गरेको छ । यसले मानिसहरुमा अनिद्राको समस्या सिर्जना गरिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । राम्रोसँग सुत्न नै नपाइने अहिलेको समयमा अरु काम नै गर्न नपाइने र केवल सुत्न मात्रै पाइने जागिर पाइयो भने कस्तो मज्जा होला ? अझ मासिक तलब झण्डै […]
एक माथि अर्को गरी चारवटा अन्डा ठड्याएर नयाँ विश्व कीर्तिमान
यूपीआई । यमनका एकजना पुरुषले चारवटा अन्डा लस्करै एक माथि अर्को ठड्याएर आफ्नै गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड तोडेका छन् । यसअघि यसरी तीनवटा अन्डा ठड्याएर मोहमद मुकवेलले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए । उनले पछिल्लो प्रयास टर्कीको इस्तानबुलमा गरेका हुन् । मुकवलले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डसलाई भनेका छन्, “यो काम हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ गर्नुपर्दा […]
छोरा पाउने आशामा टाउकोमा कीला ठोकाइन् गर्भवती महिलाले
पाकिस्तानमा एक गर्भवती महिलाले छोरो पाउने आशमा निकै खतरनाक काम गरेकी छन् । तीन छोरीकी आमा छोरा पाउने आशामा पीर (मुसलमान झाँक्री) कोमा पुगिन् । ती पीरले महिलाको टाउकोमा दुई इन्च मोेटो कीला ठोके अनि अब छोरा नै हुने ग्यारेन्टी दिए । महिलालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र स्वास्थ्य निकै गम्भीर छ । अस्पतालमा पहिले […]